Kufunwa oneminyaka engu 13 odukile | News24
Kufunwa oneminyaka engu 13 odukile
PHOTO: supplied UNomvelo Msane odukile
UHLALELE ovalweni umndeni wentombazanyana eneminyaka engu 13 ubudala yakwaVulindlela esekuyophela isonto lesithathu ingaziwa ukuthi yashonaphi.
UNomvelo Msane wase Hanley Dam obenza uGrade 7 esikoleni samabanga aphansi iSpringhaven Primary School eNorthdale kubikwa ukuthi waduka mhlaka 22 ku Okthoba kade ehambele umcimbi wokuvaleliswa kwabafundi kulesikole.
Echaza ngokuduka kwendodakazi yakhe, umama kaNomvelo uCelimpilo Shabalala uthe ibihlala nogogo wayo njengoba yena engumuntu obambe itoho eGoli.
“Ngisebenza eGoli mina kodwa kuthiwa wayetshele umama ukuthi emuva komcimbi uyosuka esikoleni aye eMbali eyovakashela ubaba wakhe. Ngathuka uma ngifona ngosuku olulandelayo ngibuza ukuthi ufikile yini kubaba wakhe wangitshela ukuthi akazange afike. Ngaqala lapho ukukhathazeka ngabe sengibuya ngiza ekhaya ukuze sizomthungatha.”
UShabalala uthe indodakazi yakhe kubikwa ukuthi yafika esikoleni kodwa akwaziwa ukuthi yashonaphi emuva komcimbi.
“Umcimbi wokubavalelisa wawungoMgqibelo kanti wazigibelela yena wafinyelela esikoleni. Isikole siyaqinisekisa ukuthi wayekhona kulomcimbi owaphela ngehora lesithathu ntambama kodwa akekho owaziyo ukuthi waphuma washonaphi emuva kwawo. Sesimbheke yonke indawo, ezibhedlela zikahulumeni nasemakhazeni kodwa asimtholi. Sikhathazekile kakhulu kodwa sinethemba lokuthi uzobuya ephephile.”
NgoLwesithathu olwedlule lomndeni kanye namanye amalunga omphakathi bebehambe benameka izithombe zakhe edolobheni ngethemba lokuthi kukhona ozovela athi umbonile.
Kuthiwa sekufonelwe zonke izihlobo eziseduze ekungenzeka ukuthi ukuzona kodwa zonke ziyazihlangula.
“Ngiyayazi indodakazi yami, angeke ivele inyamalala kanje kungonakele lutho. Ayikaze inyamalale ngalendlela kunalokho uma izohamba iyacela kuqala. Ayiyona umuntu owuvanzi iyabika uma izoya endaweni ethile. Lesigameko sisiphethe kabuhlungu njengomndeni sinxusa noma ngabe ubani ongaba nolwazi lokuthi singamtholaphi athintane nathi noma namaphoyisa.”
Okhulumela amaphoyisa esifundazweni uKapteni Nqobile Gwala ukuqinisekisile ukuthi kunedokodo lomuntu odukile eliphenywa esiteshini samaphoyisa aseMountain Rise.
Kunxuswa abamfanisayo ukuba baxhumane namaphoyisa aseduze nabo ukuze ezoxhunyaniswa nomndeni wakhe. Okanye bashayele esiteshini samaphoyisa aseMountain Rise bacele uWarrant Officer Mkhize ku 033 387 9618 noma 072 214 7439.